June 14, 2020 - Khitalin Media
အနာဂတ် ညီမလေးတွေ အချိန် (၃) မိနစ်လောက်ပေးပြီးဖတ်စေချင်တယ် …
June 14, 2020 Khitalin Media 0
မငိုပါနဲ့ညီမလေး… အရင်က…အရမ်းချစ်တယ်ဆို… လက်ထပ်ပြီးလို့ကြာလာတဲ့အခါ သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်အတွတ် ရန်သူဖစ်လာတတ်တယ်… ဘာကြောင့်လဲ…သိလား…ညီမလေး..? ရည်းစားစကား အပြောခံတုန်းကအပြောကောင်းတာကို… အဲဒါပဲ…အချစ်စစ်လို့ မခံယူပါနဲ့ အကြီးကျယ် မှားသွားတတ်တယ်… ညီမလေးမှာဦးနှောက် အမျှော်အမြင်တွေရှိတယ် မရခင်ထဲက သေချာစီစစ်ပီးမှ လက်ထပ်ပါ။ အစားမတော် တစ်လုတ် အသွားမတော် တစ်လမ်းဆိုတဲ့စကားက အလကား ရှိနေတာမဟုတ်ဖူးနော်…အရွေးမှားခဲ့ရင် […]
ဋ္ဌာပနာ​တော်​တိုက်​အတွင်းပိုင်​ ၆၆​ပေ အမြင့်ရှိပီးခမ်​နားထည်​ဝါစွာတည်​​ဆောက်​ထားခြင်း။ ၁၀​ပေ ပတ်​လည်​​ရေတွင်​နှင့် ပြဿဒ်​၅ခုပါ ကရဝိတ်​​ဖောင်​​တော်​။ ကကုသန်​မြတ်​စွာဘုရား​တောင်​​ဝှေး​တော်​ ​ကောဏဂုံမြတ်​စွာဘုရာရဲ့ဓမ္မကရိုက်​​ရေစစ်​​တော်​ ကဿပမြတ်​စွာဘုရားရဲ့​ရေသနုပ်​ သင်္ကန်း​တော်​ ​ဂေါတမမြတ်​စွာဘုရားရဲ့ဆံ​တော်​၈ဆူ ဒါ​ကြောင့် ​လေးဆူဓာတ်​ပုံ ​ရွှေတိဂုံ လို့ဆိုကြသည် ဋ္ဌာပနာ​တော်​တိုက်​မှာပင်​မအလယ်​တိုင်​မပါ သံရက်​မမရှိပဲ​ကျောက်​တုံး​ကျောက်​ခဲများဖြင့်ခန်းနားစွာတည်​​ဆောက်​ထားခြင်း။ ဖောင်​​တော်​မှာအလျား၆​ပေခွဲခန့်အတိုင်းတာရှိ ​ရွှေအစစ်​ချထားခြင်း။ ဋ္ဌာပနာ​တော်​တိုက်​ မုဉ်​ဦးအတွင်းပိုင်း​ဥက္ကလာမင်းရုပ်​ထုနှင့်စလွယ်​​တော်​ တဖုဿ ဘလ္လိကညီ​နောင်​ သာသနာ​တော်​​စောင့်နတ်​မင်း​ကြီး​လေးပါးနှင့် […]
အဘ ဦးဖိုးနီ” ပြောတဲ့ လက်ဖဝါး ပေါ်မှာ လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေပါသူများ အကြောင်း
အဘ ဦးဖိုးနီ” ပြောတဲ့ လက်ဖဝါး ပေါ်မှာ လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေပါသူများ အကြောင်း ဒီ မနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက် မှာနိုးလာပါတယ်။ ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရား ထိုင်ပြီးက ရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်လေး တစ်ခု […]
မတူညီတဲ့ ဝေဒနာပေါင်း ၂၁ ခုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းဆေးတစ်ခွက် ပြုလုပ်နည်း (ဗီဒီယို)
မတူညီတဲ့ ဝေဒနာပေါင်း ၂၁ ခုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းဆေးတစ်ခွက် ပြုလုပ်နည်း ဆေးတွေများများမသောက်ဘဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် မတူညီတဲ့ ဝေဒနာပေါင်း ၂၁ ခုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းဆေးတစ်ခွက် ပြုလုပ်နည်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းနဲ့ အသုံးပြုနည်း – ဒီဆေးတစ်ခွက်ကို အိမ်က မီးဖိုချောင်မှာရှိတဲ့ […]
လင်ကြီးနဲ့ကလေး(၂)ယောက်ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး လင်ငယ်နဲ့ ပလူးနေရတာက ပိုအရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမယုက်
လင်ကြီးနဲ့ကလေး(၂)ယောက်ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး လင်ငယ် ပလူးနေရတာက ပိုအရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမယုက်ဗျာ လင်ကြီး နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို ပစ်သွားတဲ့ မိန်းမပါ….. လင်ကြီး ကို ကလေးတေနဲ့ အကြွေးတေကြားထဲမှာ ပစ်ထားခဲ့တဲ့မိန်းမပါ….အဲ့အကြွေးတေကလဲ မိသားစုအတွက် သုံးထားတာ မပါဘူး…. သူလင်ငယ်တေနဲ့ ပျော်မြူးဖို့သုံးခဲ့တာချည်းပဲ….မိသားစုကိုဒီလိုလုပ်သွားတဲ့မိန်းမ ကောင်းစားအုံးမှာပေါ့….. အဲ့လိုမိန်းမမျိုးကိုယူတဲ့ယောင်္ကျားကိုလဲအံ့သြတယ်…..ခု ကလေးတေကလဲ အမေကိုလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ အစားလဲ […]
“စိန်တစ်လုံး သရက်သီး စားလိုက်တာ အဆိပ်မိပီး သေကံမရောက် အသက်မပျောက်သူ” (ဖြစ်ရပ်မှန်)
မနေ့ညက ထမင်းစားပီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စိန်တစ်လုံး သရက်သီး စားတယ် စားတဲ့အချိန် ဘာအရသာမှ မရှိဘူး လုံးဝကို မချိုတာ ဒါမယ့် မသိဘူး ပုံမှန်ဘဲ ထင်တာ စားပီး သိပ်မကြာဘူး ဗိုက်ထဲက ထိုးအောင့်လာတယ် အိမ်သာတက်ချင်လာတယ် အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲ ဝင်လိုက်တယ် ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာက […]
အခုခေတ်မြန်မာမိန်းကလေးကို ဖတ်စေချင်လို့ပါ …
အစဆုံးဖတ်ပြီး နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် share လုပ်ပေးပါ… “အရမ်းချစ်တယ် အချစ်ရယ်” မောင့်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “မောင့် ဆန္ဒ လိုက်လျော ပေးပါနော် ”“ဟင့်အင်း မောင်”မလိုက်လျော ပါရစေနဲ့ ”မောင်” ချစ်ကလည်းကွာ….”မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကွာ..”“ဟင့်အင်း မောင်”ကျမတို့ မိန်းမသား ဘဝမှာ […]
တရုတ် ဘေကျင်းမြို့မှာ လောခ့်ဒေါင်း ပြန်ချရပြီ . . .
တရုတ် ဘေကျင်းမြို့မှာ လောခ့်ဒေါင်း ပြန်ချရပြီ တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဘေကျင်းက လက်ကားဆိုင် တစ်ဆိုင်ကနေ ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရက် ပြန့်နှံ့မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ ဒါဇင်ပေါင်း များစွာသော လူတွေ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကနေ့( စနေနေ့ )က စပြီး ဘေကျင်း နယ်မြေအချို့ တိုကို လော့ခ်ဒေါင်း […]
၅ ရက်အတွင်း လုံးဝ ပျောက်ပါသည်။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ ကျွန်မ မျက်မြင် ဆေးနည်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေး ခြေထောက်မှာ ကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိ ဖြစ်လာပါရဲ့။ ဆေးနည်းတွေ စမ်းကြည့်ပေမဲ့ မပျောက်ပါဘူး။ မုံထူး ကျေးရွာက ကိုညိုမောင် ပြောပြတဲ့ ဆေးနည်းနဲ့ သုံးရက်ပဲ […]
ယခု သတင်းကို ( မြတ်ထွဋ် ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မြိတ်မြို့ ကလွင်ကျေးရွာအုပ်စု ပေါ်တော်မူဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှ ဒီပင်္ကရာဘုရားရုပ်ထု ဖျက်ဆီးသူအား ညချင်းတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် မနေ့က ဒီပင်္ကရာဘုရား ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူကို ပလ္လင်ပေါ်က တွန်းချ […]